Xog-warran: Qalbi Dhagax ka hor maxaa yareeyay soo hadalqaadka ONLF - Caasimada Online
Home Warar Xog-warran: Qalbi Dhagax ka hor maxaa yareeyay soo hadalqaadka ONLF
Xog-warran: Qalbi Dhagax ka hor maxaa yareeyay soo hadalqaadka ONLF
Hadda waxaa cad in arrintu aysan sidaa ahayn, haddaba maxaa is badalay?
Dawladda faderaalka ee Itoobiya ayaa badashay xeeladihii ay kula dagaalami jirtay ONLF waxayna gobolka ka billawday hawlgallo milatari iyadoo ciidammadii la xoojiyay.
Hadda deegaanka waxaa ka jira ammaan la taaban karo, balse dadka naqdiya Itoobiya waxay ku doodayaan in ammaanka iyo horumarku uu ugu fadhiyo xuquuqdoodii aadanaha iyo xoriyatul qawlkii.
Inkastoo ONLF cududdeedii la waqiiy waxay wali ku naaloonaysay taageero ballaaran oo jahliyadaha dibadda ah.
Marka laga soo tago in jahliyadahaasi ay dhaqaale ku kabi jireen dagaalka hubaysan waxaa kale oo ay dibad baxyo ku qaban jireen goobaha ay tagaan masuuliyiinta dawladda Itoobiya.
Dawladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa billaowday dadaallo baaxad leh oo ay ku mareen Yurub, Maraykanka, Australi iyo Carabaha.
Waxaana dhidibada loo aasay wakaalad khaas u ah arrimaha qurba joogta
Dadaalkaas jahliyadaha iyo kan Liyuu booliiskaba waxaa kaalin laxaad leh ku lahaa madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
Marar kala duwan ayuuna ku laalaabtay, wuxuuna dhidibadda u aasay jahliyado Soomaali ah oo Itoobiya taageersan.
Fanka iyo saxaafadda
Madaxweyne Cabdi Maxamuud intii uu xilka hayay wuxuu xoogga saaray oo kale fanka iyo suugaanta iyo saxaafadda, waxaana soo rogaal celisay dhaantadii oo la casriyeeyay.
Telefeshinka ESTV iyo FM-ta jigjiga ee horumarka aadka u baahiyana ayaana dhibada loo aasaasay.
Arrimahaas waxay gacan ka gaysteen in dad badan oo ka cabsan jiray in ay tagaan deegaanka ay booqdaan Jigjiga, qaarkoodna maalgashiyo ayay ka samaynteen.
Intaas iyo xaaladda geeska Afrika oo is badashay ayaa saamayn wayn ku yeelatay awooddii ONLF.
Maamullada Soomaalida oo ay ka mid yihiin kuwa Somaliland iyo Puntland ayaa calaaqaad ammaan la sixiixday Itoobiya, marar badanna waxaa lagu eedeeyay in ay xubno jabhadda ka tirsan ay u gacan galiyeen Itoobiya.
Eritrea oo ay taageero ka heli jireenna adduunka ayaa caddaadis saaray ka dib Markii ay Qarammada Midoobay ku eedaysay in ay qayb ka tahay ammaan la’aanta gobolka.
Hadda su’aasha taala waxay tahay qabashada Qalbi dhagax maxay uga dhigan tahay jabhadda ONLF.
Qalbi dhagax wuxuu ahaa taliyaha ciidammada qalabka sida ee ONLF.
Wuxuuse muhiim sii noqday markii dhawaan la dilay Sheekh Deeq oo ahaa hoggaankii gaashaan dhigga.
Inkastoo la is dhihi karo ONLF markii hore cudud milatari oo xoog leh ma lahayn haddana waxaa jab ku noqon karta in Cabdikariin uu gacanta u galay dowladda Itoobiya oo khibraddiisa iyo xogta uu hayo u u adeegsan karto dagaalka iyo sii kala dhantaalidda Jabhadda.